प्रधानमन्त्रीलाई एउटी बालिकाको मार्मिक पत्र : के यहाँको राज्य हाम्रा लागि चाहिँ होइन ? – Etajakhabar
उहाँको कपाल लुछिइरह्यो । त्यो पनि बोक्सी जस्तो एक निराधार आरोपमा, जसको यो भौतिक संसारमा कुनै अस्तित्व नै छैन । बिचरी राधा दिदी, कसरी झेल्नुभयो होला त्यति बर्बर, त्यति अमानवीय, त्यति क्रूर र त्यति पाशविक आक्रमण ? बिचरी राधा दिदीको के गल्ती थियो र उहाँलाई गाउँका कथित भद्र–भलादमीसामु अचेत हुन्जेल पिटियो ?
तपाईंहरूले राधा दिदीमाथि लात्ती र मुक्का बर्साएको रमिता हेर्ने रमितेहरूको भिडमा ससाना अबोध भाइबहिनी पनि थिए । तिनीहरूले के सिके होलान्, तपाईंहरूको कुकृत्यबाट ? मेरो प्रश्न त ती पुत्ला जस्ता रमितेलाई पनि छ, जो पलेँटी मारेर थपडी बजाउँदै ‘गज्जबको रमिता’ हेरिरहेका थिए । के तपाईंहरू साँच्चैको मान्छे नै हो ? मैले त बगरका ढुंगा र तपाईंहरूमा कुनै अन्तर देखिनँ ।
यो लेख नयाँ पत्रिकामा छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २९, २०७४ समय: ११:०८:४४